I-Ayisilandi - amazwe eyurophu
★ I-Ayisilandi - amazwe eyurophu ..
I - Estoniya isiEstoniya: Eesti izwe laseYurophu. IsiQongo sase - Estoniya ITalini Tallinn Ulimi isi - Estoniya. isi - Estoniya isiSetu isiVoro
IGernseyi 3 78 64, 587 828.0 St. Peter Port I - Ayisilandi 103, 000 279, 384 2.7 IReyikyaviki Reykjavík I - Ayilendi 70, 280 3, 883, 159 55.3 IDublini Dublin
i-ayisilandi, amazwe eyurophu. i-ayisilandi,
amazwe eyurophu. i-ayisilandi i-ayisilandi